ShweMinThar: လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါများ (၃)
Syndromes of Sexually Transmitted Infections လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ လက္စဏာများ
၁။ Urethral discharge ဆီးလမ်းက တခုခုဆင်းခြင်း
၂။ Persistent urethral discharge ဆီးလမ်းကနေ အရည်တောက်လျှောက် ဆင်းနေခြင်း
၃။ Genital ulcer လိင်လမ်း အနာတွေ
၄။ Vaginal discharge ဗဂျိုင်းနာက အရည်ဆင်းခြင်း
၅။ Anorectal discharge စမိုလမ်းက အရည်ဆင်းခြင်း
၆။ Lower abdominal pain ဗိုက်အောက်ပိုင်း နာခြင်း
၇။ Scrotal swelling ကျား ကပ်ပယ်အိတ် ရောင်ခြင်း
၈။ Inguinal bubo ပေါင်ခြံ အကျိတ်
၉။ Neonatal conjunctivitis မွေးစကလေး မျက်စိနာခြင်း
၁ဝ။ Genital warts လိင်လမ်း ကြွက်နို့
အများဆုံး ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပိုးတွေက (၁) Neisseria gonorrhoeae (နိုက်ဆီးရီးယား-ဂနိုးရီးယား) နဲ့ (၂) Chlamydia trachomatis (ကလာမိုင်ဒီးယား-ထွိုက်ကိုမားတစ်) ပိုးတွေဖြစ်တယ်။ ပိုး ၂ မျိုးတွဲ ဖြစ်တာလဲ မနည်းဘူး။ ဆေးကုရင်လဲ ဒီ ပိုး ၂ မျိုးလုံးကိုနိုင်တာ ပေးရမယ်။ ပိုး ၂ မျိုးလုံးကနေလဲ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာစေနိုင်တာတွေလဲ ရှိတယ်။ HIV (အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ) ဝင်လာစေဘို့ လမ်းကြောင်းပေးသလို ဖြစ်သေးတယ်။
• Gonococcal infection (ဂနိုးရီးယား) ပိုးအတွက် Cefixime 400 mg တခါတည်းသောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Ceftriaxone 250 mg တခါတည်းထိုးပါ။
• Chlamydial infection (ကလာမိုင်းဒီးယား) ပိုးအတွက် Doxycycline 100 mg တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၇ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Azithromycin 1 g တခါတည်းသောက်ပါ။
• Azithromycin ဆေးကို Gonorrhoea (ဂနိုးရီးယား) ပိုး အတွက် တမျိုးတည်းပေးရင် ဆေးယဉ်လာတာမြန်လို့ မညွှန်တော့ဘူး။ မတတ်သာရင် Azithromycin2g ပေးရတယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး အစာလမ်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်။
• N. gonorrhoeae ပိုးအတွက် Quinolones ဆေးတွေကို ခုနောက်ပိုင်း ပိုးတွေကခံနိုင်ရည်ရှိလာနေတယ်။ အရှေ့တောင် အာရှမှာ ၇ဝ% မက ဆေးမတိုးတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် Ciprofloxacin ဆေးကို ၂ဝ၁၁ နောက်ပိုင်းမှာ မသုံးတော့ဘူး။
တခြားပိုးတွေက (၃) Trichomonas vaginalis နဲ့ (၄) Mycoplasma genitalium တွေဖြစ်တယ်။ ယောက်ျား ဆီးအောင့်တယ်ဆိုရင် ဒီပိုးစစ်သင့်တယ်။
ဆီးလမ်းကနေ အရည်တွေ တောက်လျှောက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ပြန်ဖြစ်တာဖြစ်ဖြစ် ဆင်းနေရင် ဆေးယဉ်တဲ့ Urethritis ဆီးလမ်း ရောင်တာ ဖြစ်မယ်။ တချို့မှာ T. vaginalis နဲ့ M. genitalium တွေ တခုချင်းရော တွဲပြီးရောဖြစ်နေနိုင်တယ်။ N. gonorrhoeae ပိုးက Cefixime နဲ့ Ceftriaxone ဆေးတွေကို ယဉ်လာလို့ဖြစ်မယ်။
• T. vaginalis infection ကိုကုသဘို့ Metronidazole 400 mg တနေ့ ၂ ခါ၊ ၇ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Tinidazole 500 mg တနေ့ ၂ ခါ၊ ၅ ရက်သောက်ပါ။ တွဲပေးရမဲ့ဆေးကတော့
• M. genitalium အတွက် Azithromycin 500 mg တခါတည်းသောက်ပြီး 250 mg တနေ့ ၁ ခါ ၄-၆ ရက် သောက်ပါ။
၃။ Genital ulcer လိင်လမ်းအနာတွေ
Genital herpes လိင်လမ်း ရေယုံ Syphilis (ဆစ်ဖလစ်) နဲ့ Chancroid (ရှန်ကာရွိုက်) တွေဖြစ်တယ်။ အနာ တမျိုးမက တွဲနေတတ်တယ်။ ဒါတွေကနေ HIV infection ဆက်ဖြစ်တတ်တယ်။ (ဆေးနည်းကို ရောဂါတခုချင်းမှာ ဖတ်ပါ။)
၃ (က)။ Genital herpes လိင်လမ်း ရေယုံ
Herpes simplex virus (ဟားပိစ်-ဆင်းပလက်စ်) ဗိုင်းရပ်စ် (HSV-2) နဲ့ HSV-1 တွေကနေဖြစ်စေတယ်။ HSV-2 က ပိုများတယ်။ နာတဲ့ အရည်ကြည်ဖုလေးတွေ အများအပြားဖြစ်နေမယ်။ ပိုးကိုနိုင်တဲ့ဆေး မရှိသေးပါ။ ဒါပေမဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာတွေကို အများကြီး သက်သာစေနိုင်တဲ့ဆေးတွေတော့ ရှိတယ်။ Acyclovir နဲ့ အလားတူဆေးတွေဖြစ်တယ်။ လိမ်းဆေးက သိပ်တော့ မထိရောက်ဘူး။
• Acyclovir 400 mg တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၇ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Acyclovir 200 mg တနေ့ ၅ ခါ၊ ၇ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Valaciclovir 1 g တနေ့ ၂ ခါ၊ ၇ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Famciclovir 250 mg တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၇ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Acyclovir 5—10 mg/kg IV တနေ့ ၃ ခါ၊ ၅-၇ ရက် ထိုးပါ။
၃ (ခ)။ Recurrent genital herpes လိင်လမ်းရေယုံက တခါဖြစ်ဘူးရင် ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်။ သိပ်တော့ မဆိုးလှဘူး။ သူ့ဖါသူလဲ ပျောက်တယ်။
• Acyclovir 400 mg တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၅ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Acyclovir 200 mg တနေ့ ၅ ကြိမ်၊ ၅ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Valaciclovir 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၅ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Famciclovir 125 mg orally တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၅ ရက်သောက်ပါ။
၃ (၈)။ Suppressive therapy for recurrent genital herpes လိင်လမ်းရေယုံက ပြန်ဖြစ်တာကို နှိမ်နည်း
• Acyclovir 400 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁ နှစ်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Valaciclovir 500 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၁ နှစ်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Famciclovir 250 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁ နှစ်သောက်ပါ။
၃ (ဃ)။ Herpes Simples Virus (ဟားပိစ်-ဆင်းပလက်စ်) ဗိုင်းရပ်စ် နဲ့ HIV (အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ) တွဲဖြစ်ခြင်း
ရေယုံအနာတွေက မပျောက်နိုင်ဖြစ်နေမယ်။ Antiviral therapy ဗိုင်းရပ်စ်ဆေး ပေးတာ သက်သာနိုင်တယ်။
• Acyclovir 5–10 mg/kg IV တနေ့ ၃ ခါ၊ ၅-၇ ရက်ထိုးပါ။
၃ (င)။ Syphilis (ဆစ်ဖလစ်)
(ဆစ်ဖလစ်) ရောဂါဟာ တကိုယ်လုံးပြန့်တဲ့ရောဂါ ဖြစ်တယ်။ Treponema pallidum (ထွီပိုနီးမား-ပယ်လီဒမ်) ပိုးကနေ ဖြစ်တယ်။ မွေးရာပါနဲ့ နောက်မှဖြစ်တာရှိတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိကတည်းကနေ သိရင်ကုသပေးနိုင်တယ်။
Acquired syphilis နောက်မှကူးစက်တဲ့ (ဆစ်ဖလစ်) ကို
1. Early syphilis အစောပိုင်းဖြစ်တာ
a. Primary မူလ
b. Secondary ဒုတိယ နဲ့
c. Early latent stages နောက်ဖြစ်-အစောပိုင်းလို့ ထပ်ခွဲထားတာ နဲ့
2. Late syphilis နောက်ပိုင်းဖြစ်တာလို့ ခွဲထားတယ်။ ဒါကို
d. Late latent syphilis နောက်ဖြစ် နောက်ပိုင်း (Gummatous လို့ပါခေါ်တယ်)
e. Neurological and အာရုံကြော-(ဆစ်ဖလစ်) နဲ့
f. Cardiovascular syphilis နှလုံးသွေးကြော-(ဆစ်ဖလစ်) လို့ ထပ်ခွဲနိုင်တယ်။
• Primary syphilis မူလ ဆစ်ဖလစ် ဆိုတာ ကူးစက်ခံရတဲ့နေရာမှာ Ulcer အနာ၊ Chancre (ရှန်ကာ) ဖြစ်တယ်။
• Secondary syphilis ဒုတိယ (ဆစ်ဖလစ်) ဖြစ်လာရင် Skin rash အရေပြားအနီကွက်၊ Condylomata lata အရေပြားမှာ စွပ်စိုတဲ့ အသားမာ-အနာ ဖြစ်တာ၊ Mucocutaneous lesions အဖုံးလွှာပါးမှာဖြစ်တာ နဲ့ တက်စေ့ ရောင်တာတွေ ဖြစ်မယ်။
• Latent syphilis (လေးတင့်-ဆစ်ဖလစ်) ဆိုတာ လက္ခဏာမပြသေးဘဲ ငုပ်နေတာ။ ၂ နှစ်နီးပါး ကြာနိုင်တယ်။ ၂ နှစ်နောက်ကို Late latent syphilis နောက်ပိုင်း (ဆစ်ဖလစ်) ခေါ်တယ်။ WHO ကနေ ဒီလိုခွဲခြားထားတာက ဆေးကုသနည်းအတွက် အသုံးကျတယ်။ သိတာစောလေလေ ဆေးက နိုင်လေဖြစ်တယ်။
Primary ပဌမ၊ Secondary ဒုတိယ နဲ့ Early latent syphilis နောက်ဖြစ်-အစပိုင်း (ဆစ်ဖလစ်) တွေကို ကုသနည်း
• Benzathine benzylpenicillin G 2.4 million IU IM တလုံးထဲ တခါတည်းထိုးပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Procaine benzylpenicillin 1.2 million IU IM တနေ့ တခါ၊ ၁ဝ ရက်ဆက်ထိုးပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Azithromycin2g တခါတည်းသောက်ပါ။ (မှတ်ချက်။ Azithromycin ဆေးက ထိရောက်ပေမဲ့ ဆေးယဉ်တာ သတိထားရမယ်။)
• (ပနယ်စလင်) နဲ့ မတည့်သူ၊ ကိုယ်ဝန်မဆောင်သူတွေအတွက် Azithromycin2g တခါတတည်းသောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်သောက်ပါ။
Late latent syphilis နောက်ပိုင်း ငုပ်နေတဲ့ (ဆစ်ဖလစ်)
• Benzathine benzylpenicillin 2.4 million IU တပါတ် ၁ ခါ၊ ၃ ပါတ်ပြည့်အောင် ဆက်ထိုးပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Procaine benzylpenicillin 1.2 million IU တနေ့ ၁ ခါ၊ ၂၁ ရက်ဆက်ထိုးပါ။
• (ပနယ်စလင်) နဲ့ မတည့်သူ၊ ကိုယ်ဝန်မဆောင်သူတွေအတွက် Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၃ဝ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Tetracycline 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၃ဝ ရက်သောက်ပါ။
Syphilis in pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင် (ဆစ်ဖလစ်)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှာ (ဆစ်ဖလစ်) ရှိရင် ကုသမှုပေးပြီး၊ ပြန်ဖြစ်လာသေးလား ကြည့်ရမယ်။ သူ့ခင်ပွန်းကိုလည်း ဆေး ကုရမယ်။ ဆေးမတည့်တာ မရှိရင် အကောင်းဆုံးက Penicillin ဖြစ်တယ်။ ဆေးမတည့်သူတွေကို
• Azithromycin2g တခါတည်းသောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Erythromycin (Ethyl succinate or stearate) 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်သောက်ပါ။ (Erythromycin estolate ကို ကိုယ်ဝန်မှာ မပေးသင့်ပါ။)
Syphilis လူနာကို ၆ လမှာ တခါ နဲ့ ၁၂ လမှာ တခါစစ်သင့်တယ်။ တနှစ်အတွင်း ပြန်ဖြစ်-မဖြစ်ကြည့်ရမယ်။ (ဆစ်ဖလစ်) နဲ့ HIV တွဲနေရင် Primary ပဌမဖြစ်တာ နဲ့ Secondary ဒုတိယဖြစ်တာတွေမှာ ဖြစ်နေကြပုံစံနဲ့ မတူတာတွေ လာဖြစ်မယ်။
၃ (စ)။ Chancroid (ရှန်ကာရွိုက်)
Haemophilus ducreyi ခေါ်တဲ့ Gram-negative bacillus ပိုးကနေဖြစ်တယ်။ နာတဲ့ အနာဖြစ်မယ်။ Inguinal lymph-adenopathy ပေါင်ခြံတက်စေ့ ရောင်တာရော မရောင်တာပါဖြစ်နိုင်တယ်။
• Azithromycin 1 g တခါတည်းသောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Ceftriaxone 250 mg တခါတည်းထိုးပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Ciprofloxacin 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၃ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Erythromycin base 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၇ ရက်သောက်ပါ။
၃ (ဆ)။ Granuloma inguinale (ဂရင်နူလိုးမား-အင်ဂွိုင်နယ်လေ)
Donovanosis လို့လဲခေါ်တယ်။ Klebsiella granulomatis (Calymmatobacterium granulomatis) ခေါ်တဲ့ Gram-negative bacterium ပိုးကနေကူးစက်တယ်။ မနာတဲ့ အနာတွေပေါက်မယ်။ အနာက ကျယ်ကျယ်လာမယ်။ ပေါင်ခြံမှာ တက်စေ့ မရောင်ဘူး။ သွေးထွက်လွယ်တယ်။ ဆေးတွေကို အနာပျောက်တဲ့အထိ သောက်ရမယ်။
• Azithromycin, 1 g ပဌမနေ့သောက်ပါ။ နောက်မှာ 500 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်ဆက်သောက်ပါ၊ ဒါမှမဟုတ်
• Doxycycline 100 mg orally, twice daily ဒါမှမဟုတ်
• Erythromycin 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ဒါမှမဟုတ်
• Tetracycline 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ဒါမှမဟုတ်
• Trimethoprim 80 mg/sulfamethoxazole 400 mg တခါသောက် ၂ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊
၃ (ဇ)။ Lymphogranuloma venereum (LGV) (လင်ဖိုဂရင်နူလိုးမား-ဗနီရီယမ်)
Chlamydia trachomatis serovars L1, L2 နဲ့ L3 ပိုးတွေကနေ ဖြစ်စေတယ်။ ပေါင်ခြံမှာ တက်စေ့တွေ ရောင်တယ်။ နာမယ်။ တဘက်တည်းဖြစ်တာ များတယ်။ တခါတလေ ပိုးဝင်ခံရတဲ့နေရာမှာ Genital ulcer or papule လိင်လမ်းအနာ ပေါက်တယ်။
• Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Erythromycin 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Tetracycline 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်သောက်ပါ။
အများဆုံးက Vaginitis (ဗဂျိုင်းနား) ရောင်တာဖြစ်တယ်။ Cervicitis သားအိမ်ဝရောင်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ခွဲခြားဘို့တော့ ခက်တယ်။ Trichomonas vaginalis (TV), Bacterial vaginosis (BV) နဲ့ Candida albicans ပိုးတွေကနေ ဖြစ်စေတယ်။ Neisseria gonorrhoeae (NG) နဲ့ Chlamydia trachomatis (CT) တွေလဲ ဖြစ်တယ်။ တွဲဖြစ်တာလဲ ရှိတယ်။ ခွဲခြားဘို့ ခက်ရင် (TV) နဲ့ (BV) ဆေးတွေဘဲ ပေး သင့်တယ်။ ယောက်ျားတွေမှာလဲ ဘာမှမခံစားရပေမဲ့ (TV) ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးမှာ ဗဂျိုင်းနားက ဆင်းတာဖြစ်နေရင် သူ့ခင်ပွန်း (အဖေါ်) မှာ ဘာမှမခံစားရပေမဲ့ ဆေးပေးရမယ်။
၄ (က)။ Trichomonasiasis (ထွိုင်ကို-မိုနီယေးဆစ်)
T. vaginalis ပိုးကနေ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တယ်။ အမျိုးသမီး အတော်များများမှာ ဒီပိုးဝင်ခံထားရပေမဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ မပြတတ်ဘူး။ လက္ခဏာကတော့ ခပ်ဝါဝါ၊ ဝါစိမ်းစိမ်း၊ အနံ့ဆိုးတဲ့အရည် ဆင်းတယ်။ ယားမယ်။ များတယ်။ ယောက်ျားတွေလဲ ရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲနေတတ်ပြီး ဖြစ်လာရင် ဆီးလမ်းကအရည်ဆင်းတာ ဖြစ်မယ်။ နှစ်ယောက်လုံးကို ဆေးကုပါ။
၄ (ခ)။ Bacterial vaginosis (BV) (ဗက်တီရီရယ်-ဗဂျိုင်နိုးဆစ်) လိင်ကတဆင့်ကူးစက်တာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့အဖေါ်ကို ဆေးကုစရာ မလိုတတ်ဘူး။ မွေးလမ်းကြောင်းသုံး ပိုးသေဆေးပါတဲ့ သန့်ရှင်းရေး ဆေးရည်တွေ မသုံးသင့်ဘူး။
၄ (ဂ)။ Candidiasis (ကင်ဒီဒိုင်ယေးဆစ်)
Vulvovaginal candidiasis မိန်းမကိုယ်နဲ့ မွေးလမ်းမှာဖြစ်တဲ့ ဒီရောဂါက Candida albicans ပိုးကနေဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီး ၅ ယောက်မှာ ၁ ယောက်က ရောဂါလက္ခဏာ မပြဘူး။ ပြရင် ယားယံမယ်၊ နာမယ်၊ အရည်ဆင်းမယ်၊ အဖတ်တွေ ဆင်းမယ်။ စစ်ဆေးရင် Vulval erythema မိန်းမကိုယ် နီရဲနေမယ်။ ကုပ်ရာကနေ ရောင်နေမယ်။ ယောက်ျား အဖေါ်မှာ Balanitis လိင်တံရောင်ခြင်း Balanoposthitis ပန်းအဖျား အရေပြားရောင်ခြင်းတွေ ရှိနေနိုင်တယ်။ လိင်ကနေကူးတာ မဟုတ်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
Cervicitis (NG and CT) သားအိမ်ဝရောင်ခြင်းအတွက် -
• Ceftriaxone 250 mg တခါတည်းထိုးပါ၊ + Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၇ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Erythromycin 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၇ ရက်သောက်ပါ။
Vaginitis (BV, TV) ဗဂျိုင်းနားရောင်ခြင်းအတွက် -
• Metronidazole 400 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၇ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Tinidazole 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၅ ရက်သောက်ပါ။
Candidiasis (ကင်ဒီဒိုင်ယေးဆစ်) အတွက် -
• Miconazole ဒါမှမဟုတ် Clotrimazole 200 mg vaginal pessaries မွေးလမ်းကြောင်းထဲ တနေ့ ၁ ခါ၊ ၃ ရက် ထည့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Clotrimazole 500 mg vaginal pessaries တခါတည်း မွေးလမ်းထဲထည့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Nystatin vaginal pessaries 100 000 IU တနေ့ ၁ ခါ၊ မွေးလမ်းထဲ ၁၄ ရက် ထည့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Fluconazole 150 mg တခါတည်းသောက်ပါ။
မှတ်ချက်။ Doxycyclines ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမပေးရ။ Metronidazole ဆေးနဲ့ အရက်တွဲမသောက်ရ။
Physiological discharge ရောဂါမရှိဘဲ ဗဂျိုင်းနာ စိုခြင်း
ကျန်းမာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ကြည်လင်ပြီး၊ အနံဆိုးမရှိ၊ မယားတဲ့အရည် ဆင်းနိုင်တယ်။ ရာသီမလာခင်နဲ့ လာအပြီး နဲနဲပိုများနိုင်တယ်။ လလည်ရက်မှာ ပိုပြီးကျဲတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင်၊ တားဆေးသောက်ရင်၊ (IUD) ကိုယ်ဝန်တားပစ္စည်း ထည့်ထားရင် ဆင်းနိုင်တယ်။ ဆေးကုစရာ မလိုပါ။
၅။ Anorectal discharge စအိုလမ်းက အရည်ဆင်းခြင်း
ယောက်ျား-မိန်းမ စအိုလမ်းကို အကာကွယ်မပါဘဲ ဆက်ဆံရာမှာသုံးရင် ကူးစက်ရောဂါတွေ ရနိုင်တယ်။ ရောဂါလက္ခဏာ ရှိတာရော၊ မရှိတာရော ဖြစ်နိုင်တယ်။ N. gonorrhoeae, C. trachomatis, T. pallidum နဲ့ HSV တွေက အဖြစ်များတယ်။ Proctitis စအိုရောင်တာ ဖြစ်စေတယ်။
Acute proctitis ရက်တို စအိုရောင်တာဖြစ်ရင် နာမယ်၊ ဝမ်းသွားရင်နာမယ်၊ အကျိအချွဲဆင်းမယ်၊ သွေးဆင်းမယ်၊ ဝမ်းချုပ်မယ်၊ စအိုမှာ ပြည့်နေသလို၊ ဝမ်းသွားတာ မကုန်သေးသလိုနေမယ်၊ စအိုဘေးမှာလဲ နာမယ်။ LGV ကြောင့် Chronic proctitis နာတာရှည် စအိုရောင်တာဖြစ်ရင် ဝမ်းထဲ အကျိအချွဲပါမယ်။ ဝမ်းချုပ်မယ်၊ စအိုမှာ ပြည့်နေသလို၊ ဝမ်းသွားတာ မကုန်သေးသလိုနေမယ်။
စအိုနေရာ စစ်ဆေးရင် အစာဟောင်းအိမ်မှာ အကျိအချွဲနဲ့ ပြည်တွေ့မယ်၊ အထဲမှာ ရောင်နေတာ တွေ့မယ်၊ Gonococcal နဲ့ Chlamydial ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုရင် စမ်းတဲ့အခါ သွေးထွက်မယ်။ Syphilis, Herpes နဲ့ LGV ကြောင့်ဆိုရင် အထဲမှာ အနာ မြင်ရမယ်။ LGV ကြောင့်ဆိုရင် အထဲမှာ အသားနုလို တက်နေတာတွေ့မယ်။
Gonococcal rectal infection (ဂနိုးရီးယား) ကြောင့် စအိုရောင်ခြင်းအတွက်
• Cefixime 400 mg တခါတည်းသောက်ပါ။
Chlamydial rectal infection (ကလာမိုင်ဒီယား) ကြောင့် စအိုရောင်ခြင်းအတွက်
• Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၇ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Azithromycin 1 g တခါတည်းသောက်ပါ။
Herpetic proctitis ရေယုံပိုးကြောင့် စအိုရောင်ခြင်းအတွက်
• Acyclovir, 400 mg တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၇ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Acyclovir, 200 mg တနေ့ ၅ ကြိမ်၊ ၇ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Valaciclovir, 1 g တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၇ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Famciclovir, 250 mg တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၇ ရက်သောက်ပါ။
Proctitis due to syphilis (ဆစ်ဖလစ်) ကြောင့် စအိုရောင်ခြင်းအတွက်
• Benzathine benzylpenicillin G 2.4 million IU တခါတည်းထိုးပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Azithromycin 500 mg ၁ဝ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်
• Procaine benzylpenicillin 1.2 million units ၁ဝ ရက်ဆက်ထိုးပါ။
Penicillin (ပနယ်စလင်) မတည့်သူ ကိုယ်ဝန်မရှိသူတွေကို
• Azithromycin 500 mg daily ၁ဝ ရက်ဆက်သောက်ပါ။ Penicillin (ပနယ်စလင်) မတည့်သူ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကို
• Erythromycin 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်သောက်ပါ။ (Erythromycin estolate ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားမပေးရ)
Proctitis due to LGV ကြောင့် စအိုရောင်ခြင်းအတွက်
• Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၂၁ ရက်သောက်ပါ။
၆။ Lower abdominal pain ဗိုက်အောက်ပိုင်းနာခြင်း
အမျိုးသမီးတွေ ဗိုက်အောက်ပိုင်းမှာ နာနေတယ်ဆိုတာ Pelvic inflammatory disease (PID) တင်ပါးဆုံတွင်း အင်္ဂါတွေ ရောင်လို့ ဖြစ်မယ်။ PID ဆိုတာထဲမှာ Endometritis သားအိမ်အတွင်းလွှာရောင်တာ၊ Salpingitis သားအိမ်ပြွန်ရောင်တာ၊ Tubo-ovarian abscess ပြွန်နဲ့ မျိုးဥအိမ်အနာ နဲ့ Pelvic peritonitis တင်ပါးဆုံအတွင်းဖုံးလွှာ ရောင်တာတွေ ပါတယ်။ Cervix သားအိမ်ဝကို NG နဲ့ CT အပြင် Anaerobic bacteria ပိုးတွေဝင်ရာကနေ လာတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးကုရင် ဒီ ပိုး ၃ မျိုး အတွက် ပေးရမယ်။ Mycoplasma hominis ကနေဖြစ်တာလဲရှိနိုင်တယ်။
ဗိုက်နာတာအပြင် Dyspareunia လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါနာမယ်၊ Vaginal discharge ဗဂျိုင်းနားက အရည်ဆင်းမယ်၊ Menometrorrhagia ရာသီဆင်းများမယ်၊ ဆီးအောင့်မယ်၊ ရာသီဆင်းရင်နာမယ်၊ ဖျားမယ်၊ ပျို့-အန်ချင်တာတွေ ခံစားရနိုင်တယ်။ PID အဆင့်ကနေ Infertility ကလေးမရနိုင်တာ နဲ့ Ectopic pregnancy သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေ တည်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။
(Gonococcal အတွက် Ceftriaxone 250 mg တခါတည်းထိုးပါ။ ဒါမှမဟုတ် Cefoxitin2g တခါတည်းထိုးပါ။) + (Chlamydial အတွက် Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Erythromycin 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်သောက်ပါ။) + (Anaerobic infection အတွက် Metronidazole 400 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက် သောက်ပါ။)
၇။ Scrotal swelling ကျား ကပ်ပယ်အိတ်ရောင်ခြင်း
ကျားအစိထိပ်နေရာ ရောင်တာကို Epididymitis ခေါ်တယ်။ တဖက်သာ ဖြစ်တာများတယ်။ ရုတ်တရက် နာမယ်။ နဲနဲ ရောင်နေမယ်။ Epididymis ကျားအစိထိပ် နဲ့ vas deferens သုက်ပြွန်တွေ ရောင်-နာနေမယ်။ Testis ရောင်နေတာကို Orchitis ခေါ်တယ်။ နှစ်ခုလုံးရောင်ရင် Epididymo-orchitis ခေါ်တယ်။ N. gonorrhoeae နဲ့ C. trachomatis တွေကနေ Epidiymitis ဖြစ်စေတာ များတယ်။ ဆေးသေခြာမကုလို့ အမာရွတ်ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကလေးမရတာ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ Epididymitis ဖြစ်စေမဲ့ တခြားပိုးတွေကတော့ Tuberculosis တီဘီ၊ Filariasis ဆင်ခြေထောက်၊ E coli, Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa ပိုးတွေဖြစ်တယ်။
လူရွယ်တွေမှာ ကပ်ပယ်အိတ်နေရာနာတိုင်း ဒီရောဂါမဟုတ်ပါ။ Testicular torsion အစိလိမ်ရောဂါဆိုတာ ဖြစ်နေ-မနေ စစ်ရမယ်။ ရုတ်တရက် တအားနာမယ်။ ခွဲစိတ်ကုသရတာမျိုးဖြစ်တယ်။ Trauma ထိခိုက်မိတာ နဲ့ Tumour ကင်ဆာကိုလဲ ထည့်စဉ်းစားရမယ်။ Hydrocele မုတ်ရောဂါ၊ Hernia အူကျတာ နဲ့ Varicocele အကျောထုံးတာတွေလဲ စစ်ရမယ်။
(Gonococcal infection အတွက် Ceftriaxone 250 mg တခါတည်းထိုးပါ။) + (Chlamydial infection အတွက် Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁ဝ ရက်သောက်ပါ။) + (လူနာကို အနားခိုင်းရမယ်။ အနာ သက်သာဆေးတွေလဲ ပေးရမယ်။)
၈။ Inguinal bubo ပေါင်ခြံအကျိတ်
ပေါင်ခြံအကျိတ်တွေက နာမယ်၊ ပြော့စိစိနေမယ်၊ LGV နဲ့ Chancroid တွေကြောင့်ဖြစ်တာများတယ်။ Chancroid ဆိုရင် အနာပါ ဖြစ်နိုင်တယ်။ လိင်ကတဆင့်ကူးတာမဟုတ်တဲ့ ခြေထောက်အနာကြောင့် တက်စိရောင်တာနဲ့ Tuberculous lymphadenopathy တီဘီပိုးကြောင့်ဖြစ်တာတွေနဲ့ ခွဲခြားရမယ်။ အကျိတ်က ပေါက်ထွက်နိုင်တယ်။ Sinus မပျောက်နိုင်တဲ့ တလမ်းသွားအနာ ဖြစ်လာနိုင် တယ်။ ပြည် ထွက်နေမယ်။ တော်တော်နဲ့ မပျောက်ဘူး။
• Chancroid အတွက် Azithromycin 1 g တခါတည်းသောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Ciprofloxacin 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၃ ရက်သောက်ပါ။
• LGV အတွက် Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Erythromycin 500 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်သောက်ပါ။
• မှတ်ချက်။ တချို့ကို ၁၄ ရက်မကပေးရနိုင်တယ်။ ပြောစိစိအကျတ်ကို ဆေးထိုးအပ်နဲ့ စုပ်ထုတ်နိုင်တယ်။ အနာလိုခွဲတာ ပျောက်ဘို့ ကြာနိုင်တယ်။ တော်တော်နဲ့ မပျောက်ရင် အသားဖြတ်ယူစစ်ဆေးတာ လုပ်ရမယ်။
Ophthalmia neonatorum လို့လဲခေါ်တယ်။ မွေးပြီး ၄ ပါတ်အတွင်းမှာ မျက်စိနီရဲနေမယ်။ မျက်ခွံရောင်နေမယ်။ မျက်ဝတ် (ပြည်) ထွက်လို့ Purulent conjunctivitis ခေါ်သေးတယ်။ တဖက်ထဲရော နှစ်ဖက် လုံးပါ ဖြစ်နိုင်တယ်။ N. gonorrhoeae နဲ့ C. trachomatis ပိုးတွေကနေဖြစ်တာ များတယ်။ ဆေးသေခြာမကုရင် N. gonorrhoeae ကြောင့်ကနေ မျက်စိ ကွယ်သွားနိုင်တယ်။ C. trachomatis ကနေ မျက်စိအားနည်းသွားမယ်။
(Gonococcal conjunctivitis အတွက် Ceftriaxone 50 mg/kg တလုံးထိုးပါ။ 125 mg ထက်မများစေရ။ ဒါမှမဟုတ် Kanamycin 25 mg/kg တလုံးထိုးပါ။ 75 mg ထက်မများစေရ။ ဒါမှမဟုတ် Spectinomycin 25 mg/kg တလုံးထိုးပါ။ 75 mg ထက်မများစေရ။) + Chlamydial conjunctivitis အတွက် Erythromycin syrup 50 mg/kg ကို တနေ့ ၄ ခါခွဲပြီး ၁၄ ရက် တိုက်ပါ။)
• ကလေးမျက်စိမှာ ပြည်ထွက်နေရင် မျက်စိအတွင်းဘက်နေ ဘေးဘက်ဆီဦးတည်တဲ့ တလမ်းသွားနည်းနဲ့ ရေကြက်အေးဆွတ်ထားတဲ့ ဂွမ်းစလေးသုံးပြီး သန့်ရှင်းပေးပါ။ Sterile saline ဆေးထိုး မိုးရေ (ဆားရည်) ကိုလဲ သုံးနိုင်တယ်။
• Ceftriaxone နဲ့ Kanamycin တခါသုံးတာနဲ့ပျောက်တယ်။ Tetracycline eye ointment သုံးဘို့ မလိုပါ။
• Chlamydial infection ဖြစ်နေရင် ပိုးသေဆေး မျက်စဉ်းနဲ့ မရပါ။ Chlamydial pneumonia နူမိုးနီးယား ဖြစ်လာမှာကို သတိထားပါ။
• မွေးလာတဲ့ကလေးမှာ Gonococcal နဲ့ Chlamydial conjunctivitis ရှိနေရင် မအေကိုရော သူ့ယောက်ျား (အဖေါ်) ကိုပါ ဆေးကုပါ။
Anogenital warts စအိုနဲ့လိင်လမ်းက ကြွက်နို့ကို Condylomata acuminata လို့ခေါ်တယ်။ Human papillomavirus (HPV) အမျိုမျိုးကနေဖြစ်စေတယ်။ HPV types6နဲ့ 11 တွေက ကင်ဆာမဟုတ်ဘဲ၊ HPV types 16 နဲ့ 18 တွေက ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ လိင်လမ်း ကြွက်နို့ အများစုဟာ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တာ ဖြစ်တယ်။ မအေကနေ ကလေး ကူးတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကြွက်နို့ တလုံးထဲရော အများရောဖြစ်နိုင် တယ်။ Soft ခပ်ပြော့ပြော၊ Nonkeratinized အရောင်နု ကြွက်နို့က ပူနွေးစိုစွပ်တဲ့ အမွှေးမပေါက်ရာ နေရာတွေမှာ ပေါက်တယ်။ Firm မာတဲ့ Keratinized warts အရောင်ရင့် ကြွက်နို့က ခြောက်သွေ့တဲ့ ကိုယ်မွှေးပေါက်တဲ့ အရေပြားမှာ ပေါက်တယ်။
အကောင်းဆုံး ကုသနည်း မရှိသေးပါ။ တယောက်မှာ ထိရောက်ပေမဲ့ နောက်တယောက်မှာ အဲလောက်မဟုတ်ဘူး။ ပြန်ဖြစ်တာလဲ ရှိမယ်။
(၁) Chemical methods ဓါတုဆေးနည်း
a) Podophyllin 25% in compound tincture of benzoin ဆေးကို ဆရာ-ဆရာမကနေ ထည့်ပေးရတယ်။ ကောင်းတဲ့အရေပြားကို မထိစေရဘူး။ ၄-၆ နာရီအကြာမှာ ဆေးပြစ်ရမယ်။ နောက် တပါတ်မှာတခါထပ်လုပ်ပါ။ ၆-၈ ခါဆေးထည့်လို့မှ ဒီဆေးနဲ့မတိုးဘူးလို့ ဆိုနိုင်တယ်။
b) Podophyllotoxin 0.5% solution/gel ဆေးကို ဂွမ်းစလေးနဲ့ ကိုယ်တိုင် လိမ်းနိုင်တယ်။ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၃ ရက် လိမ်းပါ။ ၄ ရက် နားထားပါ။ အဲလို ပုံစံအတိုင်း ၄-၅ ကြိမ်လုပ်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် နဲ့ ကလေး နို့တိုက်နေသူတွေကို မသုံးသင့်ပါ။
c) 80—90% trichloroacetic acid (TCA) ဆေးကို ဆရာ-ဆရာမကနေ ထည့်ပေးရတယ်။ ကောင်းတဲ့အရေပြားကို မထိစေရဘူး။ ဆေးပေါ်မှာ Talc or Sodium bicarbonate ပေါင်ဒါထည့်ပေးရင် ဆေး (အက်စစ်) အပိုတွေကို ဓါတ်ပျယ်စေမယ်။ တပါတ်မှာ တခါလုပ်ပါ။ TCA ဆေးက ချက်ချင်း စားသွားတာတွေ့မယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကို သုံးနိုင်တယ်။ ၂ လနဲ့မပျောက်ရင် ဒီနည်းနဲ့မရဘူးလို့ ပြောနိုင်တယ်။
d) Imiquimod 5% cream ဆေးကို လက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဂါမ်းစနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ညမအိပ်ခင်မှာ ထည့်ပေးနိုင်တယ်။ တပါတ်မှာ ၃ ခါလုပ်ပါ။ နောက်မှာ တရက်ခြားလုပ်ပါ။ ၁၆ ပါတ်အထိလုပ်ပါ။ နောက်နေ့မနက်မှာ (၆-၁ဝ နာရီအကြာမှာ) ဆပ်ပြာသုံးပြီးဆေးပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သုံးတာ အန္တရာယ် ပေး-မပေး မသေခြာပါ။
(၂) Physical methods တခြားနည်းများ
a. Cryotherapy အေးခဲစေနည်း။ Liquid nitrogen, Solid carbon dioxide or Cryoprobe တခုခုကို သုံးတယ်။ တပါတ် တခါ၊ နှစ်ပါတ် တခါ။ မေ့ဆေးမလိုပါ။ အမာရွတ်မထင်ပါ။
b. Electrosurgery လျှပ်စစ်နည်း၊
c. Surgical removal ခွဲစိတ်နည်း။
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ – လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါများ (၃)